ठूला कम्पनीबाट पनि निकालिँदै खाडीका नेपाली, स्वदेश फर्किएर के गर्ने भन्ने अन्यौल - NA MediaNA Mediaठूला कम्पनीबाट पनि निकालिँदै खाडीका नेपाली, स्वदेश फर्किएर के गर्ने भन्ने अन्यौल - NA Media
लकडाउनअघि नै संयुक्त अरब इमिरेट्स(यूएई)को दुबईबाट छुट्टीमा घर आएका भोजपुरका भुपाल दाहालले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट देश लकडाउन भएसँगै जागिर गुमाए ।
छुट्टी सकिनासाथ कर्मथलो फर्किन नसक्नुको कारण त कम्पनीलाई जानकारी थियो, तर संक्रमणको भयावह अवस्थाले डराएर कम्पनीले छुट्टीमा भएका ९९ प्रतिशत कर्मचारी कटौतीको निर्णय गरिदियो । त्यो लामो सूचिको एक कुनामा भुपालको नाम पनि पर्यो ।
भुपाल दुबईको एक पाँचतारे होटलमा काम गर्थे । जागिर गएसँगै उनको साहारामा चल्ने परिवारले देशमै बिकल्पको खोजी गर्न थालेको छ ।
त्यसो त दुबईकै अर्को पाँच तारे होटलमा काम गर्ने सुनसरीका ललित घिमिरे पनि अहिले घरभित्रै बन्दी छन् । फाल्गुन महिनामा छुट्टी मनाउन घर आएका घिमिरेलार्इ अहिले कम्पनीले कि त राजीनामा दिन नत्र लामो बेतलबी बिदामा बस्न भनेको छ । स्थिति सामान्य हुने र पुनः काममा फर्केने टुङ्गो भने ललितको पनि छैन ।
झन्डै एक वर्ष पहिले आफ्नै पहलमा भिजिट भिसामा दुबई गएर भर्खरै काममा लागेका सुनसरीको इटहरीका शिशिर शर्मा राम्ररी २ महिना काम नगरी जागिरबाट निकालिए । होटल म्यानेज्मेन्ट सकाएर आफ्नै पहलमा दुबई गएर जागिर खोजेका शर्मा अबको भबिस्य के हुने हो, अन्यौलमा छन् ।
शर्माले पनि दुबईको पाँचतारे होटलमा जागिर पाएका थिए । अब कम्पनीले कोरोनाको स्थिति साम्य भएर आफ्नो ब्यापार बढ्न थालेपछि काम दिने आश्वासन त दिएको छ, तर कहिले, कहाँ र कसरी भन्ने प्रश्नको उत्तर भने छैन ।
उता, खोटाङ घर भएका लक्ष्मण बन्जारा पेस्ट्री चेफको रुपमा साउदी अरब पुगेको जम्मा पाँच महिना मात्र भयो । पुग–नपुग २ वटा तलब थापेपछि कोरोना भाइरसका कारण भएको लकडाउनको शिकार भएका उनी कोठामा बसेको ३ महिना हुन लाग्यो।
लकडाउनले बढाएको महङ्गीमा जुध्न अहिले लक्ष्मण जस्ता थुप्रैलाई हम्मे परिरहेको छ । झनै अहिले कम्पनीले सबै नयाँ कामदारलाई जागिरबाट निकालेर आफ्नै मुलुक फर्किनु भनी बाटो खुल्ला गरिदिएपछि लक्ष्मण कम्पनीसँग हवाई टिकटका लागि लडाइ लडिरहेका छन् । बन्द भएका हवाई सेवा नखुलेको र देश लगायत बिश्व नै चपेटामा परेको बेला कुन बाटो भएर कहिले कसरी घर फर्कने अनि बिदेश जाँदा लागेको झन्डै १ लाख ऋण कसरी तिर्ने उनको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ ।
माथि उल्लेख गरिएका केही नेपालीहरु अहिलेको कोरोना महामारीले नराम्ररी थिचिएका प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन । बिश्वव्यापी संक्रमण फैलिएपछि यसबाट असर नपरेको क्षेत्र सायदै होला, तर ठूलो मात्रमा होटल, पर्यटन तथा सुबिधाका क्षेत्रमा काम गर्ने कामदार धेरै मर्कामा परेका छन् ।
ठूलो लगानीमा अनि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरूलाई लक्षित गरेर खोलिएका होटलमा तत्काल कोही आएर बस्ने सम्भावना छैन । फेरि महामारी बिश्वब्यापी भएकाले पनि तत्काल बिलाशिताका लागि घुम्न र खर्च गर्न पर्यटक आउने सम्भावना शून्य जत्तिकै छ । त्यसो हुनाले पनि होटल उद्योगमा काम गर्ने कामदार कोरोनाको कारण बढी प्रभावित हुने निश्चित नै हो । त्योसँगै खाडी देशमा रहेका अरु क्षेत्रकै कम्पनीहरु पनि कोरोनाकै कारण निकै लामो समय उठ्न नसक्ने गरी लडेका छन । जसको असर सो क्षेत्रमा काम गर्ने लाखौं नेपाली कामदारमा पनि परेको छ ।
अब देश फर्किएर के गर्ने र कसरी परिवारको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने साथै कोरोनाको सम्भाबित महामारीबाट आफू र आफ्नालार्इ कसरी जोगाउने, त्यो सारा प्रबासी नेपालीको चिन्ताको विषय बनेको छ ।
Gallery image with caption: कुवेतमा भारतीयले नेपाली चेलीमाथी कर्तव्य ज्यान
Gallery image with caption: अष्ट्रियामा आफ्नै तीन सन्तानको हत्या गरेकी नेपाली महिलाको बयान सार्वजनिक
Gallery image with caption: फेरि बेरूतको पोर्टमा ठूलो आगलागी
Gallery image with caption: अस्ट्रेलियामा माइतीको आँगन !
Gallery image with caption: कतारको सूचिमा नेपाल उच्च जोखिममा, विदामा आएका कामदार तत्काल फर्कन मुस्किल
Gallery image with caption: इजरायलका लागि नेपाली राजदूत डा. अञ्जान शाक्य ‘एम्बेस्डर अफ एयर २०१९’ बाट सम्मानित
Gallery image with caption: युएईमा एकैदिन २२ जना नेपाली महिलाहरुमा कोरोना संक्रमण
Gallery image with caption: ‘विदेशमा रहेका कामदार फर्काउन कल्याणकारी कोषको ५ अर्व प्रयोग गर्न सकिन्छ त ?’